Somaliland: Halis Caafimaad-darro Oo Lagu Sheegay Khudaarta Somaliland Uga Timaadda Dalka Masar Iyo Tirada Dalalka Adduunka Ee Hore U Mabnuucay. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Halis Caafimaad-darro Oo Lagu Sheegay Khudaarta Somaliland Uga Timaadda Dalka Masar...
Suuqyada Magaalooyinka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa si weyn loogu iibiyaan badeecado kala duwan oo dhamaantood laga keeno dalka Masar, xilli muddooyinkii u dambeeyey wadammo badan oo dunnida ka tirsan mamuuceen in loo iib-geeyo halis caafimaad oo ku lamaan awgeed.
Badeecadahan halista caafimaad lagu sheegay ee laga keeno dalka Masar, isla markaana badankooda u iibkeenaan dalkeena ganacsato dhuuni-raac ah oo eegta macaash keliya ayaan weli hay’adaha qaabilsan dalkeena sida Wasaaradda ganacsiga, Rugta Ganacsiga, Wasaaradda Caafimaadku ka hadlin, digniinana ka siinin shacabka inay iska ilaaliyaan.
Muddooyinkii u dambeeyey oo badeecadaha u badan khudrada iyo noocyada kale qasacadaha lagu keeno ee dalka Masar ee yimaada dalkeena ayaa ku soo beegmaya xilli baddi wadamadda caalamku mamnuuceen inay dalalkooda soo galaan, ka dib markii la sheegay inay sababaan xanuun halis ah.
Badhtamahii bishii saddexaad ee sannadkan, Wasiirka Warshadaha ee dalka Sudan ayaa qoraal uu soo saaray ku mamnuucay dhamaan badeecadaha laga keeno dalka Masar.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in badeecadaha lagu farsameeyo dalka Masar xaalado halis caafimaad-darro ku leeyahiin muwaadiniintooda, taasoo cadaatay in badeecadahaasi ku jiraan wasakh halis caafimaad daro keenaysa.
Sidoo kale, lix wadamadda Khaliijka ayaa sannadkii hore mamnuucay in dalalkooda la keeno badeecadaha ka yimaadda dalka Masar, ka dib markii wadamadda Maraykanka iyo Ruushku ku soo rogeen mamnuucid in khudrada iyo dalagyada beeraha ee Masar dalalkooda yimaaddaan.
Warbixin hay’adda Beeraha Maraykanku soo saartay ayaa lagu sheegay in dalagyada beeraha ee Masar oo lagu waraabiyo biyaha bulaacadaha, lagu arkay qaarkood halis caafimaad.
Dhinaca kale, badeecado kala duwan oo caalamka laga mamnuucay, isla markaana lagu farsameeyo dalka Masar oo mudooyinkii u dambeeyey ku soo badanayey suuqyada dalkeena, loona aanaynayo markii suuqyadii caalamku ka xidhmeen in ganacsato dhuuni-raac ah u soo waarideen dalkeena, iyagoo eegaya faa’iida iyo jabnaanta ay ku soo helayaan, maaddaama meel kale loo dhoofin Karin badankooda, ayaa la saadaalin karaa inay ku keenaan mujtamaca Somaliland halisaha wadamada caalamku badanoodu ugu digeen bulshooyinkooda, ka dib markii ay ogaadeen halistooda.
Khudaarta Ka soo go’da Dalka Masar ee Somaliland la keeno, balse Dalalka kale ee Adduunka laga mabnuucay ayaa waxa ka mid ah Liinta, Tufaaxa iyo noocyo kale oo khudradda iyadoon la karin la cuno ah.
Dalka Masar ee Somaliland la keeno